Marimaritra… isaraham-pahefana | NewsMada
Takin’ny Sendikàn’ny mpitsara eto Madagasikara (SMM) amin’ny hetsik’izy ireo tato ho ato ny fampanjakana ny tany tan-dalàna, ny fahaleovantenan’ny fitsarana na ny tsy fitsabahan’ny mpanatanteraka ny asam-pitsarana, ny tsy fanaovana ho fitaovana politika ny fitsarana, ny fanatanterahana didim-pitsarana…
Efa nisy ny fitokonana fanairana tamin’izany, ny fampiatoana asa noho ny fanafintohinana, ny fanomezana fe-potoana hafoloana handinihana sy hanapahan-kevitra, ny fitokonana tanteraka… Inona no afitsoky fahefana mpanatanteraka amin’izany? Fandrirarirana tsy ahitana rariny sy rirany amin’ny raharaha.
Mahavalalanina sy mahafanina, tena misy ve ny finiavana hampihatra ny hoe fanjakana tan-dalàna? Miainga sy miankina amin’izany ny sisa: ny fahaleovantenan’ny fitsarana na tsy fitsabahana amin’ny fitsarana, ny tsy fanaovana ho fitaovana politika ny fitsarana, ny fanatanterahana didim-pitsarana…
Mbola mila fifampidinihana ny hoe fanjakana tan-dalàna? Mila ampiharin’ny isan-tsehatra sy isan’ambaratonga fotsiny ny lalàna velona, dia izay. Nahoana no tsy atao? Na hanapahan-kevitra avy hatrany, lazaina ampihabemaso ny fahavononana. Sampontsampona, mbola hananganana vaomiera manokana indray.
Tsy efa fanambin’ny fitondrana hatramin’ny nijoroany ve izany? Tsy nataony fotsiny izay, matoa tonga amin’izao fitakian’ny mpitsara izao ny raharaha. Tsy hoe zava-baovao mbola mila fifampidinihana manokana, fikaonan-doha, fitadiavana maramaritra iraisana… Mbola vao ny mpitsara aza no mihetsika.
Anisan’ny hery sady halemen’ny fitondrana io tsy fanarahan-dalàna io: hery fa mbola mampijoro azy, ivelomany, mampatanjaka… Halemena koa fa manimba tsikelikely. Ny finiavana politika amin’ny fanarahan-dalàna no tsy ao? Na raha tena atao sy ampiharina tokoa, hihahaka eo ny tsy fanjariana hatramin’izay…
Hokobonkobonina amina marimaritra tsy iraisana fa hampisaraka ve ny raharaha? Tsy maninona raha tonga amin’ny tena fisaraham-pahefana… mazava sy hentitra ary eken’ny rehetra sy iombonana.